Daraasad cusub ee dhawaan lasoo saaray oo muujisay kan fiican xiddigaha Messi iyo Ronaldo – Gool FM
Daraasad cusub ee dhawaan lasoo saaray oo muujisay kan fiican xiddigaha Messi iyo Ronaldo
Dajiye August 20, 2019
(Yurub) 20 Agoosto 2019. Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu tooshka ku ifiyay daraasad cusub ee laga sameeyay ciyaartoyda kubadda cagta, waxaana lagu jeex jeexay isbar-bardhiga joogtada ah ee lagu sameenayo xili kasta labada ciyaaryahan ee adduunka ugu fiican ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
Seynisyahano ka howlgala Jaamacada KU Leuven ayaa waxay sheegeen inay sameeyeen barnaamij lagu kala cadeyn karo kan fiican xiddigaha Lionel Messi iyo Cristinao Ronaldo.
Seynisyahanadan oo ay wehliso shirkada ku takhasustay xogta kubada cagta ee Holand SciSoprts ayaa waxay sameeyeen qaacido magaceeda loo soo gaabiyay “VAEP” taasoo la tilmaamay in lagu xalin karo isbar-bardhiga xiddigaha Messi iyo Ronaldo.
Marka loo eego qiyamtan, daraasadda ay sameysay jaamacadda KU Leuven waxaa lagu falaqeeyay tirakoobka xiddigaha Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ee xilli ciyaareedkii 2013-14 illaa iyo 2017-18 kaliya horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Natiijada ka soo baxday xogta la qiimeeyay ayaa waxay muujisay in Lionel Messi uu kaga sara maray Cristiano Ronaldo, wuxuuna helay xiddiga reer Argantina qiimeyn gaarsiisan 1.21, halka Cristiano Ronaldo uu helay 0.61.
“Waa muhiim inaan ku guuleysano horyaalka Premier League” – Maxamed Saalax
PSG oo niyad jabisay Barcelona… halka Real Madrid iyo Juventus ay sugayaan tallaabada xigta ee arrinta Neymar